I-china B UFO Light mveliso kunye nabenzi | Liper
Ukukhanya koBungqina boBu-LED
Ubungakanani beSimahla ye-EC Down Light
Amandla ePhakamileyo 50watt IP65 UkuKhanya okuKhanya
Ukuthengisa okuShushu kwe-BS
Ukuthengisa okungcono kweHS Solar
I-Angle eguquguqukayo yokuKhanya kuKhanya
Isizukulwana sokuKhanya esiPhantsi se-IP65 II
Ukucebisa ngokuKhanya kwesitalato i-C
M Ukukhanya kwezikhukula
Umzekelo Amandla Lumen I-DIM Ubungakanani bemveliso
Ikhompyuter yeLPUF-100B01 100W 8750-8970LM N 65265x130mm
Ukukhanya okuphezulu kwebay kusetyenziswa ngokubanzi kumabala emidlalo, iivenkile, indawo yokugcina izinto kunye neendawo zeshishini. Zonke ezi ndawo zinendawo efanayo: Isilingi iphakame kakhulu, akukho lula ukuyifaka okanye ukuyibuyisela. Ukuba ufuna ukufaka okanye ukubuyisela ukukhanya kwezibane, kuza umbuzo obaluleke kakhulu: Ungayikhetha njani iLight Light bay Light?
Ukuqina, ukusebenza kwamandla, uyilo olulungileyo, ukukhanya, iindleko zonke ezi zinto uya kuzijonga.
I-Lipper IP65 UFOs inokukunika isisombululo esihle sokukhanyisa kwimizi-mveliso ukuhlangabezana nazo zonke ezi mfuno.
Uyilo lobunikazi—Imilo ye-UFO enokupholisa konke kuyilo olunye, ilula kwaye intle, yahluke kakhulu kwintengiso. Imo yabucala, awunakho ukufumana ngokuchanekileyo kwimarike.
Ukuzinza—I-die yokuphosa isinki yobushushu bealuminiyam eneempiko zokupholisa iqinisekisa ukusasazeka kobushushu. Xa usenza uvavanyo lokuguga lobushushu obuphezulu, sikwenza ubhaqo lobushushu lwenxalenye ebalulekileyo yesibane, enje nge-chip ekhokelwayo, inductance, mosfet, umzimba wesibane. Izibane ze-Lipper ze-UFO zinokulwa ne-anti-corrosion enokudlula iiyure ezingama-24 kuvavanyo olunetyiwa. Ubushushu bokukhanya obulawulwa kakuhle kunye nokupeyinta okuchasene nomhlwa kuqinisekisa ubomi obude (i-30000 Hrs.).
Ukusebenza kwamandla kunye nokuKhanya—I-100W kunye ne-200W iimodeli ezimbini ziyafumaneka. Ezi zibane zisebenza ngokusebenza kwamandla kwe-100lm / w ngokweedatha zovavanyo kwigumbi lethu elimnyama. Ukuthelekisa ukukhanya kwendabuko endala kungonga amandla ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70.
Ukukhuselwa kwe-IP—Izibane zethu ezikhokelwayo ze-UFO zinokufikelela kwi-IP65 kuvavanywa ngumatshini wovavanyo olungena manzi phantsi kobushushu besimo seeyure ezingama-24.
Iziphumo zokuKhanya—I-CRI ephezulu kunye ne-R9> 0 (kuvavanywa ngokudibanisa inqanaba) kunokwenza ukuba isifundo sikhanyise ngakumbi kwaye sibonise umbala oyinyani. Ngale nto, iiLipper UFOs zinokusebenzisa kwivenkile enkulu, kwindawo yokutyela ukunceda ukubonisa iimpahla zinomtsalane ngakumbi.
Kwaye akuphelelanga apho! Ii-UFO zeLipper zi-CE kunye neRosh-eziqinisekisiweyo kwaye ziza newaranti yeminyaka emi-3. Kulula ukuphatha, ukufaka kunye nokugcina. Sikwabonelela ngefayile ye-IES kubaxhasi abenza iprojekthi ukuze ukwazi ukulinganisa imeko yokukhanyisa yokwenyani yeprojekthi.
Egqithileyo Ukukhanya kwephaneli ebuyisiweyo
Okulandelayo: I-Angle eguquguqukayo yokuKhanya kuKhanya
Isimbozo sokuKhanya okuphezulu seBay
High Bay Light lwemidlalo
Ukukhanya okuphezulu kweBay Bay
Izibane ezikhanyisiweyo ze-100w
D Ukukhanya okuphezulu kweNew Bay
Kumgangatho wesihlanu, Ukwakha 1, No. 233 Haitang Road, Wenzhou Eco & Tech Development Zone, Wenzhou City.
I-Liper C Series Ukukhanya kwesitalato kwendlela yeNdlela ...
Uyifaka njani i-LED yesitalato?